ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်	# အိပ်မက် . . (၂)Published August 12, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မိတ်ဆွေ ၊ ကျွန်တော်တို့ မနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ “အိပ်မက်” . . (၁)ရဲ့ အဆက် အိပ်မက် . . (၂) ကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေး ကြရအောင်လား။
အိပ်မက်ဟာ လူသားတွေနဲ့ နာမ်လောကက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ဆွေးနွေး ချင်ပါတယ်။ လူအတော်များများမှာ ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဘာလဲ ဆိုတော့ “ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့” အဖိုးအဖွား၊ အမိ, အဘ ဆွေမျိုးတွေ ကိုယ့်ထံမှာ လာပြီး နေချင်တယ်လို့ အိပ်မက်ပေးပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ လာတာမျိုး တစ်ချို့မှာ ကြုံဘူးကြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယ သမီးဖြစ်သူကို မမွေးခင်မှာ ဒီလို အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အလွန်ရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်သူရဲ့ မိခင် ဖြစ်သူဟာ “အဆုတ်ကင်ဆာ” နဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီး လ, အနည်းငယ်အကြာမှာ ကျွန်တော် အိပ်မက် မက်ပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ မိခင်ဟာ အိမ်ကိုရောက်လာပြီး “သူ” ဒီအိမ်မှာ နေချင်ကြောင်း ၊ နေလို့ ရမလား ဆိုပြီး မေးပါတယ်။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ဂမ္ဘီရ, မဟာဘုတ်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# အိပ်မက် . . (၁)Published August 7, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	မိတ်ဆွေ ၊ “အိပ်မက်” ဆိုတာကို ဘယ်လို နားလည်ပါသလဲ ? ဘယ်လို ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ ? ၊ ယနေ့ ဒီဘာသာရပ် ကလေးကို ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေး ကြည့်ကြရအောင်။
တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ပြီးဆုံးတဲ့ အခါ လူတွေဟာ “အနားယူဖို့” အိပ်စက်ကြရပါတယ်။ ဒါဟာ တမင်တကာ လုပ်ယူစရာမလိုတဲ့ “သဘာဝဖြစ်စဉ်” တစ်ခုပါ။ သဘာဝ တရားကြီးဟာ “နေ့” နဲ့ “ည” ဆိုပြီး ဖန်တီးပေးထားပြီး နေ့ဘက်မှာ ၀မ်းစာရှာဖို့ ၊ ညဖက်မှာ အနားယူဖို့ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ နေ့ဘက်မှာ အိပ်စက်ပြီး ညဘက်မှာ ၀မ်းစာရှာတဲ့ သတ္တ၀ါ အနည်းငယ် လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “လူသား” အပါအ၀င် သတ္တ၀ါ အတော်များများကတော့ “ည” ဆိုတာ အိပ်စက် အနားယူ ဖို့ပါ။
ဒီနေရာမှာ ညဖက်ကိုရောက်ရင် လူကသာ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ အနားယူလိုက်ပေမယ့် “စိတ်” ကတော့ အနားမယူပါဘူး။ အိပ်စက်နေခြင်းမှာ “အိပ်မက်” ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ “စိတ်” ဟာ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓဒဿန” မှာတော့ ဒီ စိတ်ကို “ဘ၀င်စိတ်” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်ပါ။
“အိပ်မက်”ဟာ လူသားတိုင်းနဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ယနေ့အချိန်အထိ “အိပ်မက်” အကြောင်းကို ဘယ်ပညာရှင်၊ ဘယ်ဘာသာရပ်ကမှ “ဘာလဲဆိုတာ” ကို အတိအကျ မပြောနိုင်ကြသေးပါဘူး။ ယနေ့အချိန်အထိ လေ့လာဆဲ ၊ စူးစမ်းဆဲ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ အဖြေရှာလို့ မရတဲ့ ပဟေဠိတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ဂမ္ဘီရ, မဟာဘုတ်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် တန်ခိုးPublished November 26, 2009 | By dr.tin bo bo	.
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,705)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,971)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,783)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,366)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,425)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,573)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,593)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,953)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,296)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,100)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,834)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,800)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,303)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,133)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,494)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,176)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,683)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,606)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,551)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,263)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,243)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,906)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,691)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,478)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,025)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !